Izingobo zomlando zabesifazane base-Afrika - ikhasi 2 kwezingu-5 - isisekelo se-afrikhepri
ngoMsombuluko, Januwari 18, 2021
Welcome Izigaba AMAFOMANA AFRIKA
U-Akissi Kouamé, umphathi wokuqala wesifazane ebuthweni lase-Ivory Coast
Isikhundla sokuba ngumphathi wamasosha e-Ivorian sanikezwa okokuqala owesimame owamenza waba yisandla esikhulu ezweni lakhe. Kukhona ...
U-Viola Davis uba ngowokuqala omnyama ukuze anqobe umklomelo omkhulu wesithandwa
UViola Davis waqokelwa umlingisi oMnandi kakhulu ochungechungeni lwedrama oluthi "Ungasuswa kanjani ukubulala" ngeSonto ebusuku. Intengo yayo ingumlando: it ...
Abashayeli bokuqala abashayeli e-Afrika
U-Ouma Laouali- uNiger Lieutenant Ouma Laouali, 28, ngo-Okthoba 21 waba umshayeli wokuqala wesifazane eNiger. Ubengomunye wamalungu eNigerian Airforce aqeqeshwa yi-United States e ...
Umlando we-Queen Pokou
U-Abla Pokou ungumshana ka-Emperor Ossei Tutu we-Ashanti Confederation yaseGhana. U-Emperor Tutu, umakhi omkhulu, wakhuphula umbuso ngokumangalisayo futhi wenza ingcebo ...
Yakha kabusha ubunikazi base-Afrika ezisekelweni zase-Afrika
U-Ama Mazama, ongowokudabuka eCaribbean waseGuadeloupe, wamtholela ubuhlakani bakhe kwezemfundo yezilimi ngo-1987 eSorbonne Nouvelle University. Waziwa njengomxhasi oshisekayo we ...
I-Amanishakheto ibhalwe ngezinhlamvu zegolide ngokwesiko lamaqhawe amade laseNubia (eSudan). Lesi sizwe esazala iGibhithe likaFaro futhi salisindisa ekuhlaselweni kwamanye amazwe ngesikhathi se ...
Abesifazane bezimpi zase-Afrika empini ebhekene nekoloni
Izindlovukazi ezingamaGibhithe zaseGibhithe Amakhosikazi angamaqhawe aseGibhithe kwakungu-Ahotep, no-Arsinoe II & III, nabo bonke labo ababeyinzalo yeRoyal House yaseKush. Babusa iGibhithe futhi bayala amabutho abo kanye nemikhumbi yasolwandle ngesikhathi sempucuko yamaRoma. Kulokhu...
Indawo yabesifazane abamnyama e-Afrika yasendulo
Ngokuhlolisisa, isithombe kanye nesimo sabantu besifazane abamnyama emiphakathini yasendulo yase-Afrika abangavumelani nanoma yiliphi ithonya langaphandle, sithola ukuthi babonwa njenge ...
Inkulumo kaWinnie Mandela
Ngenkathi uMandela engena ejele, wayengumvukeli osemusha onomlilo. Futhi bheka indoda ephume. Komndeni wami, igama likaMandela lingumthwalo ku ...
Owesifazane wase-Ivorian udala i-Yswara, umkhiqizo wokunethezeka wetii le-100% lase-Afrika
USwaady Martin-Leke, owayengumphathi weGeneral Electric eningizimu yeSahara, wethula uhlobo lwetiye yakhe kanokusho, uYswara. I-Boutique yokuqala ivulwa ngo-Agasti 6 eGoli. Vele ...
U-Aminata Traoré uphendukela ekungeneni kweFrance eMali naseMpumalanga Afrika
Ngonyaka owodwa ngemuva kokuqala kokungenelela kweServal, umbhali nosopolitiki u-Aminata Traoré basabela "imizuzu engama-20" ekungeneleleni kwaseFrance eMali naseCentral African Republic. U-Aminata Traoré, owayengungqongqoshe ...
16 June 1881: ukufa komfundisikazi uVodou Marie Laveau
INew Orleans (Louisiana) yayingenye yezindawo eziphakemeyo zenkolo yeVodou e-United States. IVodou yasungulwa eNew Orleans ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX, ingeniswa yizigqila ...
INingizimu Afrika iba ngowesifazane wokuqala wase-Afrika ukuqala i-airline
Usomabhizinisi waseNingizimu Afrika uSiza Mzimela uba ngowesifazane wokuqala wase-Afrika ukuvula inkampani yezindiza ngokusungula iFly Blue Crane. Usihlalo kanye ne-CEO yeSouth African Airways (SAA) kusukela ...
Ikhasinkomba 2 of 5 ngaphambi 1 2 3 ... 5 okulandelayo